TPI Ambatondrazaka: Tafatsangana ny Sampandraharaha misahana ny fitakiana lamandy
Mahomby ny ezaka fanatsarana ny asam-pitsarana. Tafatsangana ny Sampandraharaha misahana ny fitakiana lamandy sy sarany lany amin’ny Fitsarana na FJPA (Frais de Justice Pénale et Assimilé) ao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Ambatondrazaka.
Araka ny andininy faha-128 amin’ny didim-panjakana laharana 2014-1254 dia napetraka tamin’ny Alarobia 24 Novambra 2021, io rafitra io. Tanjona ny fanajana ny Tany tan-dalàna sy fampiharana ny ireo didim-pitsarana mivoaka mikasika ny sazy ara-bola amin’ny raharaha ady heloka, dia ny lamandy sy ny sarany lany amin’ny Fitsarana izany. Iraky ny Ministeran’ny Fitsarana nidina tany an-toerana ny delegasiona notarihin’ny Lehiben’ny Sampandraharaha misahana izany.
Nisy koa ny fanolorana fitaovana informatika avy amin’ny PAJMA (Projet d’Appui à la Justice de Madagascar), sy ireo kojakoja fampitaovana ilaina amin’ny fampandehanana ny asa. Nandray izany ny Lehiben’ny Fampanoavana. Nandritra izany fotoana izany no nanamarihana fa amin’ny maha volam-panjakana ny lamandy sy ny sarany lany amin’ny Fitsarana, dia manaraka ny fenitra amin’ny fitantanam-bolam-panjakana ny fitakiana ny fampidirana ireo vola azo avy amin’izany, ary mahazo fiofanana manokana momba izany ny mpiandraikitra (régisseur de recettes) notendrena hanatanteraka ny asa.
Fanaparihana lalàna: Tsy misy olona tokony tsy hahalala ny lalàna
Mitohy ny fidinana ifotony eto Mahajanga, ataon’ny sampandraharaha misahana ny Fanaparihana ny lalàna eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Tanjona ny fizaràna sy fampahafantarana ireo lalàna vaovao misy. Lalàna momba ny fanambadiana, sora-piankohonana ary ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (VBG).
Ireo Ben’ny Tanàna sy sefo fokontany ato amin’ny distrikan’ny Mahajanga I sy II ary kaominina 10 eto no misitraka izany.
Izao fanaparihana lalàna izao moa dia iraka avy amin’ny Minisitry ny Fitsarana izay manana ny tarigetra » Fitsarana manakaiky vahoaka ». Mpanohana ny hetsika ny PAJMA.